“ခြေတောက်နဲ့ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကန်ဖို့ကို အဓိကပြောတယ်။ ချန်ပီယံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုထားရမယ် “ ဒေါ်တင့်တင့်လွင်(MNL2ချန်ပီယံ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်) နှင့်အင်တာဗျူး - Chin World
Home Interview “ခြေတောက်နဲ့ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကန်ဖို့ကို အဓိကပြောတယ်။ ချန်ပီယံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုထားရမယ် “ ဒေါ်တင့်တင့်လွင်(MNL2ချန်ပီယံ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်) နှင့်အင်တာဗျူး
၂၀၁၉ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၂ အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ချန်​ပီယံဆုကို Chin United အသင်းကရရှိသွားတာ​ကြောင့်​ လာမယ့်​နှစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ၁ ပြိုင်ပွဲကို ပြန်လည်ယှဉ်​ပြိုင်​ခွင့်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ ချန်ပီယံဆုရတဲ့ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းနှင့် ဒုတိယဆုရ အား/ကာသိပ္ပံအသင်းတို့ဟာ လာမည့် ရာသီ MNL ပြိုင်ပွဲကို တန်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ MNL2ပထမဆုရ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းက ချန်ပီယံဆုဖလားနှင့် ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က အသင်းဖျက်သိမ်းခံရခါနီးအခြေအနေထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ MNL2ချန်ပီယံ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဒေါ်တင့်တင့်လွင်နဲ့ ချင်းယူနိုက်တက်အကြောင်းကိုအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်
မေး- ပထမဆုံးအနေနဲ့ ချင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို လွှဲပြောင်း ၀ယ်ယူဖြစ်ပုံ ပြောပြပေးပါခင်ဗျ?
ကျွန်မတို့က ချင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအနေနဲ့ ထန်တလန်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်၊ တစ်ခြားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေအတွက်လည်းလှူထားတာရှိတယ်ပေါ့၊ အဲဒီမှာ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ အားကစားအပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအချိန်မှာချင်းယူနိုက်တက်အသင်းကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံက ပျက်သွားပြီ၊ အသင်းလည်း ဖျက်သိမ်းခါနီးဖြစ်နေတယ်၊ အဲတော့ အရင်ချင်းယူနိုက်တက် ပိုင်ရှင်ဆီကနေပြီး ပြောင်းယူပြီးတော့ အသင်းပိုင်ရှင်အနေနဲ့ စတင်တည်ထောင်လိုက်တယ် စတည်ထောင်လိုက်တဲ့သဘောက နိုင်ငံခြားရန်ပုံငွေရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားရန်ပုံငွေဆိုတဲ့နေရာမှာ အစိုးရဌာနတွေရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်နယ်အခြေခံတဲ့ ဘောလုံးအဖွဲ့တွေဆိုရင် သူတို့ဖက်ကနေ ဘောလုံးပညာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပေးမှု ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတို့က ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းကို တည်ထောင်ဖြစ်တာပါ။ ချင်းယူနိုက်တက်ကနေ ရရှိလာနိုင်တဲ့ ဆုကြေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ထောက်ပံ့ကြေးဖြစ်ဖြစ် ဘောလုံးလုပ်ငန်းကနေဖြစ်ဖြစ် ရရှိတဲ့ဟာကို တစ်စိတ်တဒေသ အထောက်အကူပြုမယ်ထင်လို့ ယူလိုက်တာပါ။
မေး – ချင်းယူနိုက်တက်အနေနဲ့ တန်းဆင်းနေရပြီး ပျက်လုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အသင်းကနေ ခုလိုမျိုး ချန်ပီယံရလာအောင် ဘယ်လိုမျိုးတွေ လုပ်ပေးခဲ့တာလည်းချင်ဗျ?
ကျွန်မတို့ရဲ့အသင်း ဟာဆိုရင် အမျိုးသမီးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ သူများတွေမရွေးတော့တဲ့ အသင်းသားတွေဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့စည်းတာက နောက်ကျတဲ့အတွက် သူများတွေက သူတို့စိတ်ကြိုတ် ရွေးပြီးသွားပြီဖြစ်တော့ ကျန်နေတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သူများအသင်းတွေက စုပေါင်းပြီးတော့ တည်ထောင်ထားကြတယ်။ ကျွန်မကကျတော့ ဒီအသင်းမှာ တစ်ယောက်တည်းကဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတယ်ပေါ့။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျွန်မဆီမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေကိုပြောထားတာက ရလဒ်ကောင်းရချင်တယ်။ အဓိကက သူတို့ကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် ကရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ သူတို့ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတယ်၊ ခြေတောက်နဲ့ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကန်ဖို့ကို အဓိကပြောတယ်။ ချန်ပီယံဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကိုထားရမယ်၊ အဲဒီယုံကြည်ချက်ကိုလည်း ပြည့်မှီအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ အဲလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ခုလိုမျိုး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ချန်ပီယံဆုရလာနိုင်တာပါ။
မေး- အခုလိုမျိုး ချန်ပီဆုအထိရလာနိုင်တဲ့ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျ?
ကျွန်မတို့အသင်းရဲ့ ထူးခြားချက်က ဘာလည်းဆိုတော့ ချင်းယူနိုက်တတ်အသင်းဆိုတော့ ချင်းလူမျိုး အများအပြားလည်း ပါဝင်တယ်။ ဒီအပြင်ကို ရခိုင်လူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုး၊ ရှမ်းလူမျိုး ၊ ဧရာဝတီတိုင်း အဲလိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ခုနှစ်ခု ရှစ်ခုကပါဝင်တယ်။ အားလုံးက ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ မိသားစု တစ်ခုလိုဘဲ ခံစားရတယ်။
မေး- ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းက လာမယ့်ရာသီမှာ Myanmar National League 1 မှာ ကန်ရတော့မှာဆိုတော့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိလဲခင်ဗျ။
ကစားသမားတွေကို မိုးရာသီမှာ သူတို့နားတယ်ဆိုရင် ဘောလုံးသမား များသောအားဖြင့် မိုးရာသီမှာဆိုရင် သူတို့ဝင်ငွေမရကြဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီနားတဲ့ကာလမှာ သူတို့မိသားစုနဲ့ တွေ့ဖို့ တစ်လခွဲလောက်ကိုဘဲ အချိန်ပေးပြီးတော့ သူတို့ကို စခန်းပြန်သွင်းပြီးတော့ လစာတွေလည်း ပုံမှန်ပေးပြီးတော့ သူတို့ကို လေ့ကျင့်ပေးမယ်။ ဥပရောပဖက်က ကလပ်တွေက အလကား လေ့ကျင့်ပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်။ သူများတွေ ခြောက်လကျင့်တဲ့အချိန် ကျွန်မတို့က ကိုးလကျင့်မှာဖြစ်တယ်။
မေး- ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ရလာတဲ့ဆုဖလားကို ပြည်နယ်အစိုးရကို အပ်နှံဖို့ ရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြပေးပါခင်ဗျ?
ဒီအသင်းက ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရက ဂုဏ်ပြုပေးစေချင်တယ်။ ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ အားကစားကဏ္ဍကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ချန်ပီယံဖလားအပ်နံပွဲကိုလည်း သြဂုတ်လ သုံးရက်နေ့မှာ အပ်နံပွဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ဘောလုံးအသင်းကနေ ရရှိတဲ့စပွန်ဆာကြေးတို့ အလှူငွေတို့ကနေပြီးတော့ ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့ ကလေးတွေ အခက်ခဲရှိနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက်လှူတန်းမဲ့ အစီစဉ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘောလုံးကနေ ဝင်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကနေရတဲ့ ဟာဖြစ်ဖြစ် ငွေစာရင်းဖွင့်ပြီးတော့ ဒါဟာ ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးသာမကဘဲ ချင်းပြည်နယ်ကို အထောက်အကူပြုစေမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဖလားကို အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အပ်မှာပါ။
မေး- ချင်းတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းကို ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ တာဝန်ယူဖြစ်သွားတာလဲခင်ဗျ?
ကျွန်မအနေနဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းငါးခုခြောက်ခုလောက်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ် အဲဒီပေါ်မှာ ချင်းပြည်နယ်သည် အစိုးရဌာနပိုင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ရပ်မိရပ်ဖပိုင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ချင်းလူမျိုးတွေအပေါ်မှာ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်စဉ်ကတည်းက အားလုံးကနှလုံးသားနဲ့ ကူညီကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာ အနီးကပ်သိရှိရတဲ့အခါကျတော့ ချင်းလူမျိုးတွေက အခြေခံ ရိုးသားကြတယ်၊ ကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိကြတယ်၊ ချင်းပြည်နယ်ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနေရာလေးဖြစ်နေတယ်။ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ စီးပွားရေးဆန်တဲ့ လူတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံတာထက်စာရင် စီးပွားရေးနဲ့ အတူတူ စေတနာပါတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံစေချင်တယ်။ ကိုယ်ကပထမဆုံး လှုံ့ဆော်ပေးချင်တဲ့ ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ချင်းပြည်နယ်အတွက် ပိုလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
“ျေခေတာက္နဲ့ကန္တာမ်ိုးမဟုတ္ဘဲနဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ့ ကန္ဖို့ကို အဓိကျေပာတယ်။ ခ်န္ပီယျံဖစ္ကျိုဖစ်ရမယ္ဆိုတဲ့ ယုံကြည္ခ်က္ကိုထားရမယ် “ ဒေါ်တင့်တင့်လြင်(MNL2ခ်န္ပီယံ ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းပိုင်ရွင်) နွင့်အင္တာဗ်ူး
၂၀၁၉ျမန္မာနေရွင္နယ္လိဂ် ၂ အမွတ်ပေးဘောလုံးပြိုင္ပြဲ ခ်န္ပီယံဆုကို Chin United အသင်းကရရွိသြားတာကြောင့် လာမယ့်နွစ်ျမန္မာနေရွင္နယ္လိဂ် ၁ ပြိုင္ပြဲကျိုပန္လည်ယွဉ်ပြိုင္ခြင့်ရရွိမျွာဖစ္ပါတယ်။ပြိုင္ပြဲအပြီးမွာ ခ်န္ပီယံဆုရတဲ့ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းနွင့် ဒုတိယဆုရ အား/ကာသိပ္ပံအသင်းတို့ဟာ လာမည့် ရာသီ MNL ပြိုင္ပြဲကို တန်းတက္ခြင့်ရခဲ့ပါတယ်။ MNL2ပထမဆုရ ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းက ခ်န္ပီယံဆုဖလားနွင့် က်ပ်သိန်း ၃၀၀ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါတယ်။ မနွစ္က အသင်းဖ်က်သိမ်းခံရခါနီးအျေခအေနထျိဖစ္ခဲ့တဲ့ MNL2ခ်န္ပီယံ ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းရဲ့ပိုင်ရွင် စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရွင် ဒေါ်တင့်တင့်လြင္နဲ့ ခ်င်းယူနိုက္တက်ေအကြာင်းကိုအခုလိုဆက်ြသယ်မေျးမန်းထားပါတယ်။
မေး- ပထမဆုံးအေနနဲ့ ခ်င်းယူနိုက္တက်ဘောလုံးအသင်းကို လွှျဲေပာင်း ၀ယ်ယျူဖစ္ပုံျေပျာပေပးပါခင္ဗ်?
ကျန္မြတို့က ခ်င်းဖြံ့ဖြိုးရေးအေနနဲ့ ထန္တလန္မွာ ခရီးသြားလုပ်ငန်းတစ္ခုလုပ္ထားတယ်၊ တစ်ျခားကေ်းရြာဖြံျ့ဖိုးရေးတြေအတြက္လည်းလွူထားတာရွိတယ်ပေါ့၊ အဲဒီမွာ ခ်င်ျးပည္နယ်ရဲ့ အားကစားအပိုင်းမွာလည်း ဘယ္လိုမ်ိုး လုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါက်တော့ အဲဒီအခ်ိန္မွာခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းကလည်း ဖြဲ့စည်းပုံက ပ်က်ြသားပြီ၊ အသင်းလည်း ဖ်က်သိမ်းခါနီျးဖစ်နေတယ်၊ အဲတော့ အရင္ခ်င်းယူနိုက္တက် ပိုင်ရွင္ဆီကေနပြီးျေပာင်းယူပြီးတော့ အသင်းပိုင်ရွင်ေအနနဲ့ စတင္တည်ထောင္လိုက္တယ် စတည်ထောင္လိုက္တဲ့သေဘာက နိုင်ငျံခားရန္ပုံငြေရွိတယ်။ နိုင်ငျံခားရန္ပုံငြေဆိုတဲ့နေရာမွာ အစိုးရဌာနေတြရဲ့ ရန္ပုံငြေတြကို ထောက္ပံ့ပေးတာမဟုတ္ဘျဲပည္နယ်ေအျခခံတဲ့ ဘောလုံးအဖြဲ့တြေဆိုရင် သူတို့ဖက္ကေန ဘောလုံးပညာဘျဲဖစ်ျဖစ် ငြေကြးဆိုင်ရာထောက္ပံ့ပေးမျှုဖစ်ျဖစ် လုပ်ပေးခ်င္ပါတယ္ဆိုတော့ ကျန္မြတို့က ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းကို တည်ထောင်ျဖစ္တာပါ။ ခ်င်းယူနိုက္တက္ကေန ရရွိလာနိုင္တဲ့ ဆုကြေးဘျဲဖစ်ျဖစ် ထောက္ပံ့ကြေျးဖစ်ျဖစ် ဘောလုံးလုပ်ငန်းကေနျဖစ်ျဖစ် ရရွိတဲ့ဟာကို တစ္စိတ္တေဒသ အေထာက်အကျူပုမယ္ထင္လို့ ယူလိုက္တာပါ။
မေး – ခ်င်းယူနိုက္တက်ေအနနဲ့ တန်းဆင်းနေရပြီး ပ်က္လုနီးပါျးဖစ်နေတဲ့အသင်းကေန ခုလိုမ်ိုး ခ်န္ပီယံရလာအောင် ဘယ္လိုမ်ိုးတြေ လုပ်ပေးခဲ့တာလည်းခ်င္ဗ်?
ကျန္မြတို့ရဲ့အသင်း ဟာဆိုရင် အမ်ိုးသမီးအသင်းပိုင်ရွင်ျဖစ္တယ်။ သူမ်ားတြေမေရြးတော့တဲ့ အသင်းသားတျြေဖစ္တယ်။ ဖြဲ့စည်းတာက နောက္က်တဲ့အတြက် သူမ်ားတြေက သူတို့စိတ်ကြိုတ် ရြေးပြီးသြားပျြီဖစ်တော့ က်န်နေတဲ့ ဘောလုံးသမားတျြေဖစ္တယ်။ နောက္တစ္ခုက သူမ်ားအသင်းတြေက စုပေါင်းပြီးတော့ တည်ထောင္ထားကြတယ်။ ကျန္မြကက်တော့ ဒီအသင်းမွာ တစ်ယောက်္တည်းကဘဲ ရင်းနွီျးမှုပ်နွံထားရတယ်ပေါ့။ အဲဒီအခါက်တော့ ကျန္မြဆီမွာရွိတဲ့ ကေလးတြေကိျုေပာထားတာက ရလဒ်ကောင်းရခ်င္တယ်။ အဓိကက သူတို့ကို ကျန္မြကိုယ္တိုင် ကရင်းရင်းနွီးနွီးနဲ့ သူတို့ကို စိတ္ဓာတ္ခြန်အားပေးတယ်၊ျေခေတာက္နဲ့ကန္တာမ်ိုးမဟုတ္ဘဲနဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ့ ကန္ဖို့ကို အဓိကျေပာတယ်။ ခ်န္ပီယျံဖစ္ကျိုဖစ်ရမယ္ဆိုတဲ့ ယုံကြည္ခ်က္ကိုထားရမယ်၊ အဲဒီယုံကြည္ခ်က္ကိုလည်ျးပည့်မွီအောင္လုပ်နိုင်ရမယ္ဆိုပြီျးေပာထားတယ်။ အဲလိုနဲ့ နောက္ဆုံး ခုလိုမ်ိုး ပေ်ာ်ပေ်ာ်ရွှင်ရွှင္နဲ့ ခ်န္ပီယံဆုရလာနိုင္တာပါ။
မေး- အခုလိုမ်ိုး ခ်န္ပီဆုအထိရလာနိုင္တဲ့ ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းရဲ့ ထူျးခားခ်က္က ဘာမ်ာျးဖစ္မလဲခင္ဗ်?
ကျန္မြတို့အသင်းရဲ့ ထူျးခားခ်က္က ဘာလည်းဆိုတော့ ခ်င်းယူနိုက္တတ်အသင်းဆိုတော့ ခ်င်းလူမ်ိုး အမ်ားအျပားလည်း ပါဝင္တယ်။ ဒီအျပင္ကို ရခိုင္လူမ်ိုး၊ ကခ်င္လူမ်ိုး၊ ကရင္လူမ်ိုး၊ ရွမ်းလူမ်ိုး ၊ ဧရာဝတီတိုင်း အဲလျိုပည္နယ္နဲ့တိုင်း ခုနွစ္ခု ရွစ္ခုကပါဝင္တယ်။ အားလုံးက ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ့ မိသားစု တစ္ခုလိုဘဲ ခံစားရတယ်။
မေး- ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းက လာမယ့်ရာသီမွာ Myanmar National League 1 မွာ ကန်ေရတာ့မွာဆိုတော့ ဘယ္လျိုပင္ဆင္မှုတြေလုပ်ဆောင်ြသားဖို့ရွိလဲခင္ဗ်။
ကစားသမားတြေကို မိုးရာသီမွာ သူတို့နားတယ္ဆိုရင် ဘောလုံးသမား မ်ားသောအာျးဖင့် မိုးရာသီမွာဆိုရင် သူတို့ဝင်ငြေမရကြဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီနားတဲ့ကာလမွာ သူတို့မိသားစုနဲ့ တြေ့ဖို့ တစ္လခြဲလောက္ကိုဘဲ အခ်ိန်ပေးပြီးတော့ သူတို့ကို စခန်ျးပန်ြသင်းပြီးတော့ လစာတြေလည်း ပုံမွန်ပေးပြီးတော့ သူတို့ကို လေ့က်င့်ပေးမယ်။ ဥပေရာပဖက္က ကလပ်တြေက အလကား လေ့က်င့်ပေးမဲ့သူတြေရွိတယ်။ သူမ်ားတြေျေခာက္လက်င့်တဲ့အခ်ိန် ကျန္မြတို့က ကိုးလက်င့်မျွာဖစ္တယ်။
မေး- ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းအေနနဲ့ ရလာတဲ့ဆုဖလားကျိုပည္နယ်အစိုးရကို အပ်နွံဖို့ ရွိတယ္လို့သိရတယ္ဗ်၊ ရည်ြရယ္ခ်က္ကိုျေပျာပေပးပါခင္ဗ်?
ဒီအသင်းကျပည္နယ္ကိုယ္စာျးပုတဲ့ အသင်ျးဖစ္တဲ့အတြက် ခ်င်ျးပည္နယ်အစိုးရက ဂုဏ်ျပုပေးစေခ်င္တယ်။ ခ်င်ျးပည္နယ်ရဲ့ အားကစားကဏ္ဍကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သေဘျာဖစ္တယ်။ ခ်န္ပီယံဖလားအပ္နံပြဲကိုလည်း သြဂုတ္လ သုံးရက်နေ့မွာ အပ္နံပြဲလုပ္မျွာဖစ္တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခ်င်ျးပည္နယ္မွာ ဘောလုံးအသင်းကေန ရရွိတဲ့စပြန္ဆာကြေးတို့ အလွူငြေတို့ကေနပြီးတော့ ဘောလုံးဝါသနာပါတဲ့ ကေလးတြေ အခက္ခဲရွိနေတဲ့ ဒေသေတြမွာ ကိုယ္တတ်နိုင်ေသလာက် လက္လွမ်းမွီသေလာက္လွူတန်းမဲ့ အစီစဥ္လည်း ပါဝင္ပါတယ်။ ဘောလုံးကေန ဝင္တဲ့ဝင်ငျြေဖစ်ျဖစ် ဘယ္ကေနရတဲ့ ဟျာဖစ်ျဖစ် ငြေစာရင်းဖြင့်ပြီးတော့ ဒါဟာ ဘောလုံးဖြံ့ဖြိုးရေးသာမကဘဲ ခ်င်ျးပည္နယ္ကို အေထာက်အကျူပုစေမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ြရယ္ခ်က္နဲ့ လုပ်နေတျာဖစ္တဲ့အတြက် ဒီဖလားကို အဲဒီရည်ြရယ္ခ်က္နဲ့အပ္မွာပါ။
မေး- ခ်င်းတိုင်းသားမဟုတ္တဲ့ တစ်ျခားတိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်ေအနနဲ့ ခ်င်းယူနိုက္တက်အသင်းကို ဘယ္လိုခံယူခ်က္နဲ့ တာဝန်ယျူဖစ်ြသားတာလဲခင္ဗ်?
ကျန္မြအေနနျဲ့ပည္နယ္နဲ့တိုင်းငါးချုေခာက္ခုလောက္မွာ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းတြေလုပ္တယ် အဲဒီပေါ်မွာ ခ်င်ျးပည္နယ်သည် အစိုးရဌာနပိုင်းဘျဲဖစ်ျဖစ် ရပ္မိရပ္ဖပိုင်းဘျဲဖစ်ျဖစ် ခ်င်းလူမ်ိုးတြေအေပ်ါမွာ ဘျဲဖစ်ျဖစ် ခရီးသြားလုပ်ငန်း ဖြံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတြေ လုပ်ဆောင္စဥ္ကတည်းက အားလုံးကနွလုံးသားနဲ့ ကူညီကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့အတူ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းတြေလုပ္လာတဲ့အခါမွာ အနီးကပ်သိရွိရတဲ့အခါက်တော့ ခ်င်းလူမ်ိုးတြေက အျေခခံ ရိုးသားကြတယ်၊ ကူညီခ်င္တဲ့စိတ်ရွိကြတယ်၊ ခ်င်ျးပည္နယ်ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအေနနဲ့ ဖြံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းမျွာဖစ်ျဖစ် ဖြံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနေရာလေျးဖစ်နေတယ်။ ပညာရွင်တြေအေနနဲ့ စီးပြားရေးဆန္တဲ့ လူတြေရင်းနွီျးမုပ်နွံတာထက္စာရင် စီးပြားရေးနဲ့ အတူတူ စေတနာပါတဲ့ လုပ်ငန်းရွင်တြေ ရင်းနွီျးမုပ်နွံစေခ်င္တယ်။ ကိုယ္ကပထမဆုံး လှုံ့ဆော်ပေးခ်င္တဲ့ ပုံစံလည်ျးဖစ္တယ်။ အဲဒါကြောင့် ခ်င်ျးပည္နယ်အတြက် ပိုလုပ်ျဖစ်ြသားတာပါ။
Previous post ၀န်ကြီးချုပ်အပါအ၀င် ၀န်ကြီးတစ်ပါးနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌကို ဖြုတ်ချရေး တောင်းဆိုသူများအား ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ဟုဆို
Next post ကင်းတလင်းရွာသားများကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်မှ ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်